DHAGEYSO:3 rag ah oo kufsi wadareed ugu gaystay gabar 16 sano jir ah magaalada Wajeer | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:3 rag ah oo kufsi wadareed ugu gaystay gabar 16 sano jir...
DHAGEYSO:3 rag ah oo kufsi wadareed ugu gaystay gabar 16 sano jir ah magaalada Wajeer
Dhacdo aad u xanuun badan ayaa ka dhacday ismaamulka Wajeer ka dib markii 3 nin rag ah ay kufsi wadareed u gaysten gabar 16 sano jir ah.
Hooyada dhashay gabadhan oo la hadshay warbaahinta ayaa dalbatay in gabadheeda ay hesho cadaalad.
Dhanka kale waxaa dhacdan cambaareeysay madaxa bulshada ee dowlad deegaankaasi Marwo Faadumo Yuusuf Cabdullahi.
Sidoo kale ciidamada amaanka ee Wajeer ayaa arrinkan faahfaahin ka bixiyay.
Previous articleKenya iyo UK oo kala saxeexday laba heshiis oo muhiim ah oo ku saabsan caafimaadka
Next articleDHAGEYSO:Milateriga Soomaaliya oo sheegay inay gobolka Hiiraan ku dileen 30 Al-Shabaab ka tirsan